I-orange kunye ne-vanilla flan, i-dessert elula kwaye ekhawulezayo yokwenza. | Ukupheka kweKhitshi
I-orange kunye ne-vanilla flan
UMontse Morote | | Postres
I-orange kunye ne-vanilla flan idessert yendabuko engasweleki emakhayeni ethu. Ukulungiswa kwayo kulula kakhulu kwaye kunezithako ezimbalwa esinayo. bucala ngasekhohlo iorenji kunye nevanilla flan, Yenziwe ngaphandle kwe-oveni, ukuba asifuni kusebenzisa i-oveni, sineephakeji zokuzilungiselela ezenza kube lula kakhulu kuthi.
Ungalungiselela iiresiphi ze iipuddings ngeendlela ezininzi kunye neencasa, sinako ukwenza izinto ezintsha kwaye silungiselele iidessert ezimnandi.
Ukuthatha ithuba iiorenji ezilungileyo Ndiyilungisile le flan orange. Iiorenji sesinye seziqhamo zesitrasi ezisityiweyo, sinomxholo ophezulu wevithamini C, sisiqhamo esithandwa kakhulu kwaye sisetyenziselwa iidessert ezininzi.
I-dessert efanelekileyo kuyo yonke intsapho, enegalelo elikhulu leevithamini, ilunge kakhulu. Ndiyakuthanda ukusebenzisa iziqhamo ukwenza iidessert nazo njengoko zibenza babe sempilweni.
Imvulophu eyi-1 yeflan yeesevisi ezi-4
Ijusi yeorenji eyi-125
4-6 amacephe eswekile
1 ithisipuni yevumba elimnandi
Ithisipuni ye-orenji zest
Ukulungiselela le ntyatyambo yeorenji kunye nevanilla, kuqala sihlahla ulusu lweorenji kwaye sisuse ijusi.
Sifaka epanini, ubisi, ijusi, iswekile, ivanilla kunye ne-orenji. Siyishukumisa kwaye siyinyibilikise imvulophu ye-flan, siphinde siyivuselele kude kube yonke into ekumvulophu inyibilike.
Sifaka ipani phezu kobushushu obuphakathi, siya kushukumisa kude kushushu kwaye siqale ukujiya.
Sithatha ukungunda sigubungele amazantsi onke e-caramel engamanzi.
Xa i-flan iqala ukutsala, beka bucala ngelixa ushukumisa umzuzu. Umxube siwuthululela kumbumba. Siyivumela ukuba ipholile.
Sifaka kwifriji 3-4 iiyure okanye ubusuku bonke. Kwaye uzakulungela ukutya !!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Postres » I-orange kunye ne-vanilla flan
I-Cuttlefish kwisosi eshushu
Ikholifulawa kunye nesuphu yeapile